Onye Mmepụta Dijitalụ / MMJ - KWTX | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Jobs » Onye Mmepụta Dijitalụ / MMJ - KWTX
Mmeghe Job: Onye Mmeputa Digital / MMJ - KWTX
Nke a bụ ọrụ pụrụ iche n'ime ụlọ ọrụ akụkọ ọgbara ọhụụ na-elekwasị anya na hyper-mpaghara, nke na-enye ndị nta akụkọ mgbasa ozi / onye na-emepụta mgbasa ozi ọtụtụ ihe ọhụụ. Ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma na-agbasa ozi ọma, na-enwe mkparịta ụka dị ogologo oge, nwee nkà na ụzụ siri ike, ma na-achọ ịnọ na njedebe nke ntụziaka kachasị ọhụrụ na akụkọ, ọrụ a bụ maka gị! Anyị na-achọ onye nwere ike inye aka wulite akụkọ mgbasa ozi anyị na-aga n'ihu ma nwee ike iche n'ezi igbe iji mepụta ụzọ ọhụrụ iji jikọọ ndị na-ekiri akụkọ na ọtụtụ nyiwe. Onye a ga-ebu oru maka ihe okike di n'etiti mgbasa ozi nke nwere ike ikwuputa na nyiwe dijitalụ, na ichota ohere di ndu na ikuku, webụsaịtị anyị, ngwa, mgbasa ozi mmekọrịta na ngwaọrụ OTT. Onye tozuru oke ga-enwetakwa ọmarịcha mgbasa ozi yana mbipụta ederede na ikike ịbanye iji kọọ yana / ma ọ bụ mepụta ihe dị mkpa maka ndị otu egwuregwu na-aga ọsọ ọsọ ọsọ.
Ọrụ ndị bụ isi na ọrụ dịịrị gụnyere, mana ọnweghị oke na:
- Reportkọ akụkọ na-agbasa akụkọ na-eme na mpaghara na / ma ọ bụ mba na usoro / ịhazi ajụjụ ọnụ.
- Ike ịmepụta, ugbu a na teknụzụ na-eduzi ọdịnaya pụrụ iche kwa ụbọchị nke ga-agbasa na ọtụtụ nyiwe.
- Ike igbanwe ọdịnaya ndị emepụtara na nyiwe OTT ka ọ bụrụ akụkọ enwere ike iji ya rụọ ọrụ na ikuku, weebụ, na mgbasa ozi mmekọrịta.
- Ike iche echiche ngwa ngwa na-enweghị edemede ma gaa n'ihu na ọtụtụ nyiwe n'otu oge.
- Ga-enwerịrị ike ị nweta ọtụtụ ọrụ ma jupụta na nka na ụzụ mgbe ị na-akọ akụkọ ndụ.
- Na-arụ ọrụ na ọrụ pụrụ iche, gụnyere akụkọ nyocha na atụmatụ ogologo oge.
- Na-enyere aka na ọrụ ụlọ ọrụ akụkọ ndị ọzọ dịka njikwa na-eduzi.
- Ike ịrụ ọrụ oge na oge mgbanwe nwere ike ịgbanwe na-adaberekarị na mkpa ndị otu akụkọ.
- Akara ogo na Journalism ma ọ bụ mpaghara metụtara ka achọrọ maka ọnọdụ a.
- Ahụmịhe ọkachamara mbụ na-arụ ọrụ na mgbasa ozi akụkọ na ikuku ma ọ bụ dị ka onye nrụpụta họọrọ.
- Ga-abụrịrị onye edemede nwere ọgụgụ isi na nyiwe niile, nwee iwu nke ụtọ asụsụ na ịma ọkwa ụkpụrụ AP.
- Ga-enwerịrị ndị na-anụ akụkọ na-achọkarị ihe dị ọhụrụ, ugbu a na nke na-esote.
- Ga-enwerịrị ihe gbasara gọọmentị na ọkwa obodo, steeti na nke etiti.
- Ahụmịhe na ngwanrọ na-edezi vidiyo na vidiyo dị oke mkpa.
- Ihe omuma nke mmemme nyocha dika Social News Desk na Crowdtangle choro.
- Ike ọkachamara na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nkà.
- Ezigbo nkwukọrịta na nhazi / ịhazi usoro.
- Nkà na ụzụ na nkà na ụzụ siri ike, na ikike ịkụ, dezie, dee, na iji teknụzụ duzie ọdịnaya n'adabereghị.
- Akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala dị mma na ndekọ ịkwọ ụgbọala dị mma.
- Ikike na ihe ọmụma iji nye aka na nyiwe Telemundo nke anyị chọrọ.
Previous: Igwe okwu ọdịyo
Osote: Jr. Creative Coordinator